Yako Saiti Inoti "Chengeta Kunze"? | Martech Zone
Yako Saiti Inoti "Chengeta Kunze"?
Muvhuro, July 26, 2010 Svondo, Ndira 19, 2014 Douglas Karr
Kana ini ndichishanda nevamwe veSEO nyanzvi, ivo vanosundira akanyanya kutsva mavhoriyamu kana anonyanya kukwikwidza mazwi Pandinoshanda neyakajairwa midhiya, ivo vanogara vachisundira mabhora eziso uye kusvika. Pandinoshanda nevarume vezvenhau, vanogara vachiyera vateveri nevateveri. Pandinoshanda nevakagadziri, ivo vanoda kudhizaina kune madiki masarudzo.
Ini handiteerere kwavari.
Kushambadzira hakusi kwekutsvaga yakaderera dhinomineta yekuwedzera mukana wekuwana kana kugovera. Saiye mushambadzi, dzimwe nguva mushandirapamwe unogona kunge uri wekutsvaga sosi imwechete kana kukurudzira kuti ataure nenzira kwayo. Zvinoenderana nesimba ravo, nguva yemushandirapamwe, uye nevateereri vatinoshuvira kusvika. Dzimwe nguva haisi dhinomineta zvachose - ndeye wacky, yakanyatsoiswa uye yakanangwa tarisiro yechimwe chinangwa.
Ini ndinotyora mitemo.
Nzvimbo dzangu dzinotyora mitemo yakawanda. Mumwe munhu akataura kuti, kunyangwe ini ndichimanikidza vatengi vangu kugadzira masayiti ane akanyanya kusiyanisa mafonti pane yakajeka kumashure, yedu nyowani midhiya agency saiti yakagadzirirwa neakasviba kumashure uye akareruka mafonti… zvakanyanya kuoma kuverenga. Dzimwe shamwari dzakaratidza kuti haina kukodzera pane diki resolution resolution.
Chokwadi ndechekuti, ini handidi kukwezva vashanyi nemanetbook kana malaptop ekare. Ini ndoda kutora kutariswa kubva kuvanhu vane hombe resolution. Ini handidi kukwezva makambani asingazokwidziridze kubva paInternet Explorer 6. Handitombodi kuti vanhu vaverenge saiti yangu. Ndiri kuda kuti vaiongorore uye voshaya kuti ndogona kuvabatsira here kana kuti kwete uye voita kuti vadzvambidze fomu rewebhu.
Kana iwe ukabvumirana, iwe hausi wangu tarisiro.
Ndine yakakwirira bounce mitengo. Zvakanaka izvo. Ini handidi yakaderera bounce mitengo. Ndiri kuda kukwezva vazhinji vevashandisi veinjini yekutsvaga, asi ini ndoda kuti vanhu ivavo vatore pfungwa yekukasira vosiya kana kubatana Ini handiende mune yakadzama tsananguro nezve zvatinoitira makambani… ndezvekuti isu tinofarira angangoita ese makuru kambani. Chinangwa chesaiti yangu kusaremekedza mapoinzi mazhinji uye kukurudzira vamwe vese kuti vatibate.
Iyi blog, chokwadika, yakasiyana. Tiri kupfuura nekumwe kugadzirisa patsva mwedzi uno kusimudzira kusvika uye nekuparadzirwa kwenzvimbo iyi, pamwe nekukwezva vamwe vashanyi. Chinangwa chedu nemari inowanikwa pamwe nazvo zvinobatsira kana tasvika kune vamwe vashanyi. Tichiri kuisa zvimwe zvigadzirwa zvakagadziridzwa kune vashandisi vepamusoro, asi hatidi kudzikamisa vateereri vedu.
Saiti yako inoti "Chengeta Kunze"? Zvakanaka!
Kushambadzira pamhepo hakusi kwekusvikira vanhu vazhinji sezvaunogona, dzimwe nguva ndezvekuodza moyo vateereri vasiri ivo. Ndosaka ndanga ndiri anopikisa kushandisa masystem senge Digg yemakambani masaiti. Nguva zhinji ivo vanongoviga saiti uye vanokonzeresa nyaya dzehunyanzvi vasina kuwedzera mumwe chete akakodzera mushanyi.
Pane zvinhu chaizvo zvaunogona kuita kukwezva uye kukanganisa vateereri kubva kune yako webhusaiti saiti kana blog. Usatya kutyora mitemo.
Makaro, Kutya uye Vakundikana Vemabhizimusi
Chakavanzika Chedu Chekutsvaga Injini Kugadziridza
Jul 27, 2010 pa 11: 46 AM
Izvi ndizvo zvandinoda nezve epamhepo uye yekushambadzira nyika, iyo chete mitemo ndeyekuti hapana mitemo! Chero bedzi zvinangwa zvikaiswa, kufambira mberi kunoteedzerwa uye mhedzisiro iri yakanaka, chii chimwe chakakosha?
Doug, chandinoremekedza pamusoro pako kusatya kwako mukumira uye nekupa yako maonero. Zvinoita kuti vanhu vafunge zvakanyanya, uye ndiyo yakanakisa spark yekubudirira kwehungwaru ingabvunzwe.
Jul 27, 2010 na3: 27 PM
Ndatenda Harrison - wataura chokwadi. Ndicho chinangwa chakakosha.